ESL သည်ထင်ရှားသောအားကစားပွဲများအတွက် Intinor ကိုရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ESL စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက် Intinor ရွေးကောက်
ESL စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက် Intinor ရွေးကောက်
14.D10, IBC 2019, RAI, အမ်စတာဒမ်ရပ် - Intinor နည်းပညာ, အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဆွီဒင်ရဲ့ဦးဆောင်ပြုစုသူ, ESL, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်အားကစားကုမ္ပဏီ၎င်း၏ဖုံးလွှမ်းရန် Intinor ရဲ့ Direkt Router က, Direkt router ကို Lite နှင့် Direkt လက်ခံယူနစ်တစ်ခုပေါင်းစပ်ချထားတော်မူကြောင်းကိုကြေညာလိုက်ပါတယ် ထုတ်လွှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် Linear ။
ESL ရိုးရာ linear အသံလွှင့်မှုအတွက်ဝေးတစ်တင်းကျပ်စီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှုမော်ဒယ်ကနေရွှေ့နှင့်ဝဘ်၎င်း၏ပြည်တွင်းရေးဖြန့်ဖြူး Workflows ချဲ့ထွင်ရန်လိုခငျြနှင့်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း linear ထုတ်လွှင့်ဂရုစိုက်။
လွှ၏ ESL ဒါရိုက်တာစတီဗင် Jalicy, ကျနော်တို့သည် dynamically ထိန်းချုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်နည်းပညာပိတ်ဆို့မှုများထဲကထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရစကေးနှင့်ကယ်မလွှတ်နိုင်မယ့်ဖြေရှင်းနည်းကိုလိုခငျြ "ဟုပြောသည်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့တစ်ခုတည်းဂေဟစနစ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းနှင့် linear Workflows ပေါင်းစည်းဖို့အနာဂတ်စွမ်းရည်နှင့်အလားအလာချင်တယ်။
"ဒီအောင်မြင်ရန်ရန်, ငါတို့ protocol ကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု Agnostic ခဲ့တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ system ကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရိုးရာ linear takers မှရိုးရာ linear အကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် Workflows သို့တည်ဆောက်ရန်, ဒါပေမယ့်သူကအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာငါတို့အမာခံပရိတ်သတ်ကိုမှအကြောင်းအရာများပို့ပေးရန်ကြွလာသောအခါ ESL များအတွက်ဒါအောင်မြင်သောပါပြီသောတူညီသောအယူအဆများကိုသုံးပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်တစ်ခုခု။ Intinor ဒီစီမံကိနျးအတှကျစုံလင်သောမိတ်ဖက်ခဲ့ပါတယ်။ "
ESL များအတွက် Intinor ရဲ့ဖြေရှင်းချက် Direkt Router က, Direkt router ကို Lite နှင့် Direkt လက်ခံယူနစ်တစ်ခုပေါင်းစပ်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်ခံယူနစ်ထို့နောက်လိုအပ်သည့်သက်ဆိုင်ရာရိုးရာထုတ်လွှင့်စံချိန်စံညွှန်းညီသည့် SDI output ကိုထွက်ချိုးထားတဲ့ IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတဆင့်အကြောင်းအရာလက်ခံရရှိရန် ESL ရဲ့ takers enable ။ အဆိုပါ router များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုတိုက်ရိုက် takers မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေ content တွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ ESL ကို enable သူတို့ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် SDI အရင်းအမြစ်သွင်းအားစုကိုကိုင်တွယ်အဖြစ်ဖြန့်ကျက်၏ကျောရိုးပါ၏ တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းလုပ်ဆောင်; ဖြစ်စဉ်ကို IP ကိုပံ့ပိုးမှုများကို; နှင့်ကျယ်ပြန့် ESL ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးအာမခံပါသည်။
အဆိုပါ Direkt စနစ်, ESL ယခုတိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လည်ပတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် linear အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုတစ်စျေးကြီးစီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှုမရှိ, သာမန်အားဖြင့် linear အကြောင်းအရာပေးပို့ဘို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းရိုးရာအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲနိုင်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းအကြိုးခံစားခှငျ့မြားကိုလညျးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် RTP, HLS ဖွ, RTMP နှင့် SRT protocols များအဘို့ options များနှင့်အတူ Agnostic တည်းခိုနေစဉ်အများပြည်သူအင်တာနက်ကျော် 100 ရာခိုင်နှုန်းကမလိုအပ်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် Intinor ရဲ့စီးပွားဖြစ် Bifrost ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (BRT ™) protocol ကိုသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်များပါဝင်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်ဆိုင်လည်းထို့နောက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲဆန်းသစ်ထုတ်လွှင့်သဘောတရားများကိုများအတွက် key ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမကယ်မလွှတ်နိုင်သည့် ESL ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Workflows အတူ Intinor နည်းပညာပေါင်းစပ်ဖို့ ESL နိုင်ပါတယ်။
Jalicy တစ်ခုနီးပါးမဖြစ်နိုင်နောက်ဆုံးနေ့တစ်နောက်ခံဆန့်ကျင် Set "ကဆက်ပြောသည် - ငါတို့သည်အယူအဆ၏သက်သေတဆင့်အခြေခံဒီဇိုင်းကနေသွားရခဲ့ပြီးတော့ထက်နည်းလေးပတ်အတွင်းအပြည့်အဝစကေးဖြန့်ကျက်ပေါ်သို့ - Intinor တို့သည်ကြီးစွာသောဤလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးမိတ်ဖက်များနှင့်ကျွန်တော်ခဲ့ မကြာမီ 28th-29th စက်တင်ဘာလ 2019, အ Barclays Center ကနယူးယောက်ကနေရှငျနထေိုငျရာအရပျယူသောသစ်ကို Intinor စနစ်, အသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲအစအဦးကိုယ်စားပြုပြီးကျနော်တို့ Intinor နည်းပညာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အာကာသအတွင်း ESL ရဲ့ဆက်လက်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက်အရေးပါလှတဲ့အသွားကြောင်းယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ "
Intinor CEO ဖြစ်သူ Roland Axelsson ကျနော်တို့အနေနဲ့ပြင်ပတင်းကျပ်နှင့်စျေးကြီးစီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှုပေးဘို့မိမိတို့လိုအပ်ဖယ်ရှားပစ်ကြောင်း ESL များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိ Direkt system ကိုကယ်လွှတ်ကြပြီမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြောင်း "ဟုပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိုင်-ups မှသူတို့ကိုလွှတ်ပေးတော်မူပြီးမှ, ငါတို့အရမ်းနှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများအတွက် ပို. ပင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် applications များနှင့်များထားရှိမျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ESL အီလက်ထရောနစ်အားကစားသို့ entry ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆွေးနွေးမှုများပါဝင်သည်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားထုတ်လွှင့်များ၏ချောမွေ့စွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေးပို့ဖို့မှတဆင့်ထုတ်လုပ်မှု၏ရှုပ်ထွေးစီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်သည့်အင်္ဂါနေ့ 17 စက်တင်ဘာလအပေါ် IBC အီလက်ထရောနစ်အားကစားဟန်ပြအတွက်အဓိက feature ပါလိမ့်မယ်။
Intinor IBC 14 စဉ်အတွင်းရပ် 10.D2019 အပေါ် Direkt Router က, Direkt router ကို Lite နှင့် Direkt လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ESL မြောက်မြားစွာအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းပြိုင်ပွဲနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကိုဖြတ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်အားကစားကုမ္ပဏီသို့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သော ESL တစ်ခုမှာအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိခ်နှင့်ပြိုင်ပွဲ branded မြင့်မားပရိုဖိုင်းကိုလည်ပတ် Intel ကExtreme မာစတာ, ESL Pro ကိုအဖွဲ့ချုပ်နှင့်အခြားထိပ်တန်းဆင့်အားကစားကွင်း-size ကိုဖြစ်ရပ်များအဖြစ် ESL အမျိုးသားချန်ပီယံ, အောက်ခြေအပျော်တမ်းခွက်နှင့်အောင်သွယ်ပွဲစားစနစ်များ®, သုညကနေသူရဲကောင်းမှတတ်နိုင်သမျှအတိုလမ်းကြောင်းကို defining ။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရုံးများနှင့်အတူ, ESL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်ရှေ့ဆက်အီလက်ထရောနစ်အားကစားကိုဦးဆောင်နေသည်။ ESL MTG, ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးအုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Intinor ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့် IP ကိုကွန်ရက်များကျော်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အလှူငွေများအတွက်အဖြစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကို web TV အတွက်ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ, Intinor အသေးစားထုတ်လုပ်မှုကနေအဓိကရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများအထိဖောက်သည်ရှိပါတယ်။ Intinor လည်းကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတူအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုံးစံ-ဒီဇိုင်းစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲများတွင်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.intinor.com.
မာတင် Weber နဲ့ဥရောပအရောင်း Manager ကို
Bifrost ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး BRT Direkt လက်ခံ Direkt Router Direkt Router Lite ESL အီလက်ထရောနစ်အားကစား HLS ဖွ IBC Intinor Intinor Technologies ip အိုင်ပီကွန်ရက်များ linear အသံလွှင့် တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်း ဖြစ်စဉ်ကို IP ကိုပံ့ပိုးမှုများကို RTMP RTP SDI ရလဒ် SRT 2019-09-11
ယခင်: Hitomi နဲ့အသံလွှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်များ IBC 2019 မှာဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် alignment ကို Demo ပါလိမ့်မယ်
နောက်တစ်ခု: နယူးပန်အာဖရိကန်လွှဝန်ဆောင်မှု MVMO များအတွက် Simplestream နှင့်အတူ V-Nova အပေါင်းအဖေါ်များ